Забур 89 CARS - Nnwom 89 AKCB
1Mɛto Awurade adɔe ho dwom daa daa;
mede mʼano bɛda wo nokwaredi adi awo ntoatoaso nyinaa mu.
2Mɛka se wʼadɔe no tim hɔ daa nyinaa,
na woatim wo nokwaredi wɔ ɔsoro hɔ ankasa.
3Wokae se, “Mene onipa a mayi no no ayɛ apam;
maka ntam akyerɛ me somfo Dawid.
na wʼahengua nso atim wɔ awo ntoantoaso nyinaa mu.’ ”
5Awurade, ɔsorosorofo kamfo wʼanwonwade,
na wo nokwaredi nso, wɔkamfo wɔ ahotefo asafo mu.
6Na hena na ɔne wo Awurade sɛ wɔ ɔsoro hɔ?
Hena na ɔte sɛ Awurade wɔ ɔsoro abɔde mu?
7Akronkronfo agyinatufo mu, wosuro Onyankopɔn;
wɔde osuro kɛse ma Onyankopɔn wɔ akronkronfo nhyiamu ase.
8Asafo Awurade Nyankopɔn, hena na ɔte sɛ wo?
Wo, Awurade, woyɛ ɔkɛse na wo nokwaredi atwa wo ho ahyia.
9Wudi po a ɛworo no so;
nʼasorɔkye bobɔ kɔ soro a, wobrɛ no ase.
10Wodwerɛw Rahab sɛ atɔfo no mu baako;
wode wo basa dennen no bɔɔ wʼatamfo pansamee.
wiase ne nea ɛwɔ mu nyinaa wo na wufii ase.
12Wobɔɔ atifi ne anafo.
Tabor ne Hermon de ahosɛpɛw to dwom ma wo din.
wo nsam wɔ ahoɔden, woama wo nsa nifa so.
14Wʼahengua no fapem yɛ trenee ne atɛntrenee;
adɔe ne nokwaredi di wʼanim.
15Nhyira nka wɔn a wɔasua sɛnea wɔbɔ wo abodin,
wɔn a wɔnantew wʼanim hann no mu, Awurade.
16Wogye wɔn ani wɔ wo din mu da mu nyinaa;
wodi ahurusi wɔ wo trenee mu.
17Wone wɔn anuonyam ne ahoɔden,
na wʼadom nti yɛyɛ nkonimdifo.
18Ampa ara, yɛn kyɛm wɔ Awurade,
na yɛn hene wɔ Israel Kronkronni no.
19Da bi wokasaa wɔ anisoadehu mu,
kyerɛɛ wʼahotefo se,
“Madom ɔkofo bi ahoɔden;
mapagyaw aberante bi afi nnipa no mu.
20Mahu Dawid, me somfo;
21Me nsa bɛwowaw no;
ampa ara me basa bɛhyɛ no den.
22Ɔtamfo biara renhyɛ no sɛ ontua tow;
omumɔyɛfo biara rentumi nhyɛ no so.
23Mɛdwerɛw nʼatamfo wɔ nʼanim
na mabobɔ nʼahohiahiafo ahwe fam.
24Me nokware adɔe bɛka ne ho,
25Mɛtrɛw nʼahye mu akosi po so,
na ɔde ne nsa nifa bɛto nsubɔnten so.
26Ɔbɛfrɛ me aka se, ‘Wone mʼagya,
me Nyankopɔn, me nkwagye botan.’
asase so ahene nyinaa no mu ɔkɛse.
28Mɛma mʼadɔe a mewɔ ma no no atena hɔ daa,
nʼahengua nso betim hɔ akosi sɛ ɔsoro betwa mu.
30“Sɛ ne mmabarima po me mmara
na sɛ wɔanni mʼahyɛde so,
31sɛ wobu mʼahyɛde so
na sɛ wɔanni me hyɛ nsɛm so a,
32ɛno de mede abaa bɛtwe wɔn aso wɔ wɔn bɔne ho
na wɔn amumɔyɛ nso mede mmaatwa atwe wɔn aso;
33Nanso merennyae mʼadɔe a meyɛ ma no no
na mɛkɔ so adi no nokware.
na merensesa nea mede mʼano aka no.
na merentwa Dawid atoro da,
na nʼahengua nso betim wɔ mʼanim te sɛ owia;
37ebetim hɔ daa te sɛ ɔsram,
ɔdanseni nokwafo a ɔwɔ wim no.”
38Nanso woapo no, woapa nʼakyi,
wo bo afuw nea woasra no ngo no.
39Woagu apam a wo ne wo somfo pamee no,
woagu nʼahenkyɛw ho fi wɔ mfutuma mu.
40Woabubu nʼafasu nyinaa
ama nʼabandennen adan nnwiriwii.
41Wɔn a wotwa mu wɔ hɔ nyinaa fow no fa;
na wayɛ aniwude ama ne mfɛfo.
42Woama nʼatamfo nsa nifa so;
ama wɔn nyinaa di ahurusi.
43Woama nʼafoa ayɛ ɔkwa,
44Wode nʼanuonyam aba awiei
na woatow nʼahengua akyene fam.
45Woatwa ne mmerantebere nna so
na wode animguase nguguso akata no so.
46Awurade, enkosi da bɛn? Na wode wo ho behintaw?
Wʼabufuwhyew bɛkɔ so adɛw akosi da bɛn?
47Kae sɛnea me nkwanna twa mu ntɛm so.
Efisɛ woabɔ yɛn nyinaa sɛ ade a etwa mu ntɛm so!
48Hena na ɔbɛtena ase a ɔrenwu da?
Anaasɛ hena na obetumi agye ne ho afi owu tumi nsam?
49Awurade, ɛhe na wo tete adɔe kɛse no wɔ,
nea wufi wo nokwaredi mu de kaa ntam kyerɛɛ Dawid no?
50Kae, Awurade, sɛnea wɔadi wo somfo ho fɛw
ne sɛnea manya koma ama amanaman no akutiabɔ,
51Awurade, akutiabɔ a wʼatamfo de adi fɛw
de adi nea woasra no ngo no anammɔntu biara ho fɛw.
52Ayeyi nka Awurade daa!
AKCB : Nnwom 89